Ihe ndekọ nke Porfirio Diaz nke Mexico
History & Culture Mexico & North America
Biography nke Porfirio Diaz
Onye ọchịchị nke Mexico maka Afọ 35
José de la Cruz Porfirio Díaz Mori (1830-1915) bụ onye Mexico, onyeisi oche, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na onye ọchịchị aka ike. O chịrị Meksiko nke ji ụgbụ ígwè mee ihe ruo afọ 35, site na 1876 rue 1911.
Oge ọchịchị ya, nke a na-akpọ Porfiriato , ama ọganihu na ọganihu na ọganihu dị ukwuu na Mexico. Enwere mmetụta dị ole na ole na abamuru, Otú ọ dị, dị ka ọtụtụ nde mmadụ na-arụsi ọrụ ike n'ịgba ohu.
Ike furu ya na 1910-1911 mgbe ọ gbasịrị ntuli aka megide Francisco Madero, nke mere Mgbanwe nke Mexico (1910-1920).
Ọrụ Ndị Agha Mmalite
A mụrụ Porfirio Díaz a mestizo , ma ọ bụ nke ndị India-European heritage, na steeti Oaxaca na 1830. A mụrụ ya n'ime oke ịda ogbenye ma ọbụnadị ruo eruchaa ịgụ akwụkwọ. Ọ na-agbakwasị ụkwụ na iwu, mana na 1855, ọ sonyeere ndị agha na-emesapụ aka bụ ndị na-alụ ọgụ megide Antonio López nke Santa Anna . N'oge na-adịghị anya, ọ chọpụtara na ndị agha bụ ezigbo ọrụ ya, ọ nọgidekwara na-alụ agha, na-alụ ọgụ megide French na agha obodo nke mechiri Mexico na etiti narị afọ nke iri na itoolu. Ọ hụrụ na ya na onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-emesapụ aka ma na-ebili ọnụ Benito Juárez , ọ bụ ezie na ha abụghị enyi onwe ha.
Na May 5, 1862, ndị agha Mexican n'okpuru General Ignacio Zaragoza meriri ike nke buru ibu na nke kachasị mma nke ndị na-awakpo French na mpụga obodo Puebla. Ndị Mexico na-echeta agha a kwa afọ na " Cinco de Mayo ." Otu n'ime ndị isi egwuregwu na-alụ ọgụ bụ onye ntorobịa bụ Porfirio Díaz, onye na-edu otu ìgwè ndị agha.
Ọ bụ ezie na Agha Puebla na -egbu oge njem French na-agaghị agafe na Mexico City, ọ mere ka Díaz mara aha ma kwado aha ya dịka otu n'ime ndị agha kachasị mma na-eje ozi na Juarez.
Díaz na Juárez
Díaz nọgidere na-alụ ọgụ maka nnwere onwe na-emesapụ aka n'oge ọchịchị nkenke nke Maximilian nke Austria (1864-1867) ma bụrụ ihe enyemaka iji weghachite Juarez dịka Onyeisi.
Otú ọ dị, mmekọrịta ha ka dị jụụ, Díaz gbaakwara Juarez na 1871. Mgbe ọ nwụrụ, Díaz nupụrụ isi, o jikwa Juarez mee ọnwa anọ iji mee ka a malite ịwakpo ya. N'abụ 1872 ka Juarez nwụsịrị na mberede, Díaz malitere ịkatọ nlọghachi ya. Site n'enyemaka nke United States na Chọọchị Katọlik, ọ kpọtara ndị agha na Mexico City na 1876, wepụ President Sebastián Lerdo de Tejada ma nweta ike na "nhoputa ndi ochichi."
Don Nyefee na Ike
Don Porfirio ga-anọgide na ike ruo n'afọ 1911. O jere ozi dịka Onyeisi oge dum ma ọ bụghị maka afọ 1880-1884 mgbe ọ chịrị site n'aka onye nkuzi ya bụ Manuel González. Mgbe afọ 1884 gasịrị, ọ na-enye aka site na onye ọzọ ma na-ahọrọ onwe ya ọtụtụ ugboro, mgbe ụfọdụ, ọ dị mkpa ka a họpụtara aka ya ka a gbanwee Iwu ahụ ka o mee ya. Ọ nọgidere na-enwe ike site na nhazi aka nke ihe ndị dị ike nke obodo Mexico, na-enye onye ọ bụla dị nnọọ mma nke achịcha iji mee ka ha obi ụtọ. Ọ bụ naanị ndị ogbenye ka ewepụrụ kpamkpam.
The Economy Under Díaz
Díaz mepụtara ọganihu akụ na ụba site n'ikwe ka ego mba ọzọ mepụta akụnụba dị na Mexico. Ego si na United States na Europe pụta, n'oge na-adịghịkwa anya, e wuru ụlọ, ihe ọkụkụ, na ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ.
Ndị America na ndị Britain tinyere ego na mines na French, French nwere nnukwu ụlọ ọrụ na-ere ákwà na ndị Germany na-achịkwa ọrụ ọgwụ na ngwaike. Ọtụtụ ndị Spen bịara Mexico ka ha rụọ ọrụ dị ka ndị ahịa na n'ugbo, ebe ndị ogbenye na-eleda ha anya. E tinyere akụ na ụba nke ụgbọ okporo ígwè na ọtụtụ kilomita iji jikọọ obodo ukwu niile na ọdụ ụgbọ mmiri.
Mmalite nke Ọgwụgwụ
Ihe mgbawa malitere pụtara na Porfiriato na afọ mbụ nke narị afọ nke 20. Ọnọdụ akụ na ụba wee banye nlọghachi na ndị na-egwupụta akụ na ụra. Ọ bụ ezie na a kwụsịrị ikwe nkwenye na Meksiko, ndị njem ahụ bi na mba ọzọ, nke kachasị na ndịda United States, malitere ịhazi akwụkwọ akụkọ, ide ede akwụkwọ megide ọchịchị dị ike na nke gbagọrọ agbagọ. Ọbụna ndị na-akwado Díaz nọ na-enwe obi ụtọ, n'ihi na ọ họpụtaghị onye nketa n'ocheeze ya, ha na-echekwa ihe ga-eme ma ọ bụrụ na ọ nwụrụ ma ọ bụ nwụọ na mberede.
Madero na 1910 Nhoputa ndi ochichi
N'afọ 1910, Díaz kwupụtara na ọ ga-ahapụ nnwere onwe ziri ezi ma na-enweghị ntụrụndụ. N'ịbụ onye nọpụrụ iche n'eziokwu, ọ kwenyere na ya ga-emeri asọmpi ọ bụla. Francisco I. Madero , onye edemede na onye nkụzi ime mmụọ sitere n'aka ezinụlọ bara ọgaranya, kpebiri ịgba ọsọ megide Díaz. Madero enweghị ezigbo ihe ọhụụ, ọhụụ ọhụụ maka Mexico, ọ na-eche na oge ruru Díaz ka ọ pụọ, ọ dịkwa mma ka onye ọ bụla were ọnọdụ ya. Díaz mere ka e jide Madero ma zuo ntuli aka mgbe ọ bịara doo anya na Madero ga-emeri. Madero, nwere onwe ya, gbagara United States ma kwupụta na ya bụ onye mmeri ma kpọọ maka mgbanwe agha.
Mgbanwe ahụ gbasaa
Ọtụtụ na-ege ntị na oku nke Madero. Na Morelos, Emiliano Zapata anọwo na-alụ ọgụ maka ndị nwe ala dị ike ruo otu afọ ma ọ bụ karịa, ma na-akwado ngwa ngwa na Madero. N'ebe ugwu, ndị isi ndị agha-ndị agha na-aga agha Pancho Villa na Pascual Orozco were ndị agha ha dị ike gaa n'ọhịa. Ndị agha Mexico nwere ezigbo ndị uweojii, dịka Díaz ji kwụọ ha ụgwọ, mana ndị agha ụkwụ ji ụgwọ, ndị na-arịa ọrịa na ndị a zụrụ azụ. Villa na Orozco meriri ndị ụkọchukwu ọtụtụ oge, na-etowanye Mexico City na Madero na-akwa. Ke May 1911, Díaz ama ọfiọk ke enye ama emeri onyụn̄ enyịme enye aka ntan̄mfep.
Legacy nke Porfirio Diaz
Porfirio Díaz hapụrụ ala nna ya. Ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha bụ: site na nkwụsịtụ nke nkedo, onye na-enwu gbaa Santa Anna ọ dịghị nwoke ọ bụla dị mkpa n'akụkọ ihe mere eme nke Mexico kemgbe nnwere onwe.
N'akụkụ dị mma nke nchịkọta Díaz ga-abụ ihe ọ rụzuru n'akụkụ akụnụba, nchebe na nkwụsi ike. Ke ini enye ekenyenede ke 1876, Mexico ama osio ke mbuari ke ediwak isua ekọn̄ ekọn̄ ye ke ererimbot. Ụlọ akụ ahụ tọgbọ chakoo, e nwere ihe dị ka kilomita 500 site n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na mba ahụ dum, obodo ahụ dịkwa n'aka ndị ikom ole na ole dị ike bụ ndị na-achịkwa mba dị iche iche dị ka ndị eze. Díaz dị n'otu mba site n'ịkwụsị ma ọ bụ na-etipịa ndị agha obodo ndị a, gbara ume ka ndị mba ọzọ malite ịmaliteghachi akụ na ụba, wuru ọtụtụ puku kilomita nke okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè ma gbaa ha ume ka ha na-egwupụta akụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Iwu ya na-aga nke ọma ma mba ahụ ọ hapụrụ na 1911 dị nnọọ iche na nke o ketara.
Ihe ịga nke ọma a bịara dị ukwuu maka ndị ogbenye Mexico, Otú ọ dị. Díaz mere ntakịrị maka klas ndị dị ala: ọ kaghị mma mmụta, ọ dịkwa mma ka ahụ dịkwuo mma ka ọ bụrụ akụkụ dị mma nke akụrụngwa ka mma maka isi ahịa. A naghị anabata ndị mmadụ na ọtụtụ ndị na-eche echiche na Mexico bụ ndị a dọọrọ n'agha. A na-enye ndị enyi bara ụba nke Díaz ọnọdụ dị ike na gọọmentị ma kwere ka ha zuo ala site na obodo ndị India n'enweghị egwu nke ntaramahụhụ. Ndị ogbenye dara mbà Díaz na agụụ, nke gbawara na Mgbanwe nke Mexico .
A ghaghị itinye mgbanwe ahụ na Díaz. Ọ bụ iwu ya na mmejọ ya nke kpuchiri ya, ọ bụrụgodị na mmalite ya site na mkparịta ụka nwere ike ịpuchi ya site na ụfọdụ n'ime arụrụala ndị mechara mee.
Ndị Mexico oge a na-ele Díaz anya n'ụzọ dị mma ma na-echezọ mmejọ ya ma hụ Piaferia dịka oge nke ọganihu na nkwụsi ike, ọ bụ ezie na ọ dị ntakịrị ìhè. Ka òtù ndị Mexico na-etolite, ọ chefuola ọnọdụ nke ndị ogbenye n'okpuru Díaz. Ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ndị Mexico n'oge a maara oge ahụ nanị site na ọtụtụ telenovelas - operas opera nke Mexico - na-eji oge dị egwu nke Porifiriato na Revolution dịka ihe ndabere maka ọdịdị ha.
> Isi mmalite
> Herring, Hubert. A History nke Latin America Site na mmalite ruo ugbu a . New York: Alfred A. Knopf, 1962.
McLynn, Frank. Villa na Zapata: A History of the Mexican Revolution. New York: Carroll na Graf, 2000.
Ụbọchị Independence nke Mexico - September 16
Mgbanwe Mba Mexico: Zapata, Diaz na Madero
Anya na Ihe Ebube Na-esote Flag nke Mexico
Agha Mexico na America: Agha nke Palo Alto
Agha Mexico na America: Agha Monterrey
Ihe ndekọ nke Pedro de Alvarado
Biography nke Enrique Pena Nieto, Onyeisi nke Mexico
Ndụ na Akụkọ nke David "Davy" Crockett
Agha Dị Ukwuu nke Onwe nke Mexico na Spain
Eziokwu iri banyere Nna Miguel Hidalgo
Agha nke Chapultepec na Agha Mexico na America
Obodo nke Mexico - Ụlọ nke Guanajuato
Dinosaurs na Prehistoric Animals nke Alabama
Mahadum University nke Oregon State
'London Bridge is Falling' Chords
SAT Scores maka ịbanye na obi
Origins nke 'Birdie' na 'Eagle': Otú Ha Si Bụrụ Iwu Gbasara
10 Eziokwu Ndị Nduzi
Ihe kacha mma maka ụbọchị ọmụmụ
Ndị ọkachamara nke kachasị ụgwọ ọrụ site na ịmalite ụgwọ ọrụ
Omuma Christmas Carols maka ESL Classes
Akwa Chicago Fire nke 1871
Okwu ndị na-eto eto na-eto eto
Bombast na Okwu na Ide
Nkọwa na-adịghị agwụ agwụ French - Adjectifs indéfinis
Ndị agha na-agba ọsọ n'oge ochie
Ntụrụndụ, Ụlọ ihe nkiri, na okwu Bekee
Nkọwapụta Nchịkọta Nchịkọta Ahịa
10 Ezi Reasons To Homeschool
Okpukpe na-ekweghị na Chineke: Ọ Bụ Okpukpe Na-ekweghị na Chineke?
Piano na keyboard keyboard Music maka Beginners
10 Eziokwu na-adọrọ mmasị banyere Bess Beetles
Kedu ihe arụ ọrụ na-enweghị isi?
Ntughari nke mmanu mbu nke oma
7 Ihe Mere A Ga-eji Na-ahụ "Ndị Miserables" Anya